रंगमञ्चमा सांस्कृतिक इतिहासको उत्खनन- कला - कान्तिपुर समाचार
राज्य प्रशासन तथा आधुनिकताको प्रवेशले कसरी किराती संस्कृतिको मौलिक पक्ष ओझेलमा परे, नाटक सेमुनाले खोजी गर्छ
काठमाडौँ — आधुनिक प्रविधि र विकासको लहरले पूर्वेली सभ्यता, संस्कृति र जीवन पद्धतिलाई ढपक्कै ढाक्यो । गोरेटा बाटा सडकमा परिवर्तन भए । सप्तकोसी (अरुण) नदीको किनार हुँदै हिँड्ने पुर्खाका सन्तान सहरी संस्कृति र संस्कारमा रमाउन थाले । साकेला/सान्केवा संस्कारमा राज्यको प्रशासन र नीति हाबी भयो । बितेका तीन दशकमा किराती सभ्यता र संस्कृतिमा के–के पक्ष हाबी भए ? किरातीले के पाए, के गुमाए ? नाटक ‘सेमुना’ ले यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोजेको छ ।
पूर्वी नेपालमा फैलिएका किरात संस्कार, संस्कृति तथा जीवन पद्धतिको पृष्ठभूमिसहित साकेलालाई करिब तीन दशक पुरानो तत्कालीन जनजीवन र त्यसैभित्रको एक वियोगान्त प्रेमकथासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । नाटकभित्र तीन दशकअघिको समाज, परिवेश, आफ्नै संस्कार र परम्पराभित्र रमाएका किराती जनजीवन, बाँच्नकै लागि तिनीहरूले गरेको संघर्ष अनि अव्यक्त प्रेमकथा छन् ।
तत्कालीन समयमा पूर्वी पहाडी जिल्लालाई सडक सञ्जालले छोएको थिएन । तिनताक माझकिरात, भोजपुरको हतुवा, आमचोक, रामप्रसाद राई गाउँपालिका तथा खोटाङको बोपुङ क्षेत्रका किराती साहुको भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्थे । अजंगको सप्तकोसी नदीको किनारामाथि भीरको गोरेटो बाटोमा उनीहरूको यात्रा जोखिमपूर्ण थियो । त्यही भीरको बाटो छिचोलेर समकालीन समयसम्म बाँचेका र भारीसँगै अरुण नदीमा जिन्दगी नै खसालेकाहरूको कथालाई नाटकले प्रस्तुत गरेको छ ।
साकेला नाच्दै अनि अरुण नदी किनारमा सँगसँगै यात्रा गर्दागर्दै बसेको जेठा र कान्छीबीचको प्रेमकथाको रोमाञ्चकता नाटकमा देख्न पाइन्छ । जुन प्रेम उनीहरूले मनले महसुस गर्छन् तर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । अरुण नदीमा सधैंका लागि जिन्दगी खसाएका जेठाका लागि कान्छी उनै जेठाको चिहानलाई कुरेर आजीवन बस्छिन् । यी दुईबीचको प्रेमकथालाई जोड्दै नाटकले किराती समुदायको संस्कृतिसँग दर्शकलाई साक्षात्कार गर्ने जमर्को गरेको छ । प्रकृतिमाथि आस्था राख्ने किरातीहरू, भूमि पूजा गर्ने उनीहरूको संस्कारदेखि मृत्यु संस्कारलाई नाटकले समेटेको छ ।
पुरानो समाजलाई देखाउने पात्रहरूको अभिनय, लबज तथा मञ्चीय साजसज्जाले पुरानै समयको झल्को दिन्छ । इतिहास र वर्तमान समय/पुस्तालाई नाटकले गाँसेको छ । किराती संस्कृतिमा राज्य प्रशासन तथा आधुनिकताको प्रवेश भएपछि कसरी मौलिक पक्षहरू ओझेल पर्दै गएका छन् भन्ने विषयलाई नाटकले सुरुवाती र अन्तिम दृश्यसम्म समावेश गरेको छ ।
हरेक उँभौली/उँधौलीमा पितृ तथा प्रकृतिको पूजा गर्दै नाचिने साकेलालाई किराती आफ्नो जीवन दर्शन मान्छन् । तिनै अवसरमा पितृ तथा देवलाई समेत चाहिने रक्सीको प्रयोग हाल राज्यको ऐन–कानुनले गर्दा कसरी गैरकानुनी भएको छ भन्ने विषयलाई पनि नाटकले उठान गर्छ । नाटकमा सेमुनाहरू मुना हुन चाहन्छन् । उनीहरूलाई सातो होइन, मःम मन पर्छ ।
कथाकार दिलीप बान्तवाको लेखन रहेको नाटकको परिकल्पना तथा निर्देशन नीता राईले गरेकी हुन् । बान्तवाका अनुसार ‘सेमुना’ विशेष गरी माझकिरात, भोजपुरको हतुवालगायत खोटाङको बोपुङ क्षेत्रतिर नै नाचिने साकेन्वा/साकेला नाचको नाम हो । यिनै संस्कृतिलाई युवा पुस्ताले गरेको बेवास्ता, सडक विकासको नाममा किराती बस्तीदेखि चिहानसम्म चलेको डोजर आतंकको त्रास र पीडालाई नाटकको अन्तिम दृश्यले निकै पीडादायी रूपमा देखाएको छ । जेठाको चिहान भएरै गाउँमा मोटर बाटो जाने कुरा उठ्छ । आफ्नो प्रेमीको चिहानलाई नियाल्दै कान्छीले अन्तिम पटक दर्शन गर्छिन्, ‘जेठा, अब तिम्लाई पनि यहाँ बस्न दिँदैनन् । तिम्रै घर भएर मोटर बाटो लाने रे ।’
रंगमञ्चमा अभिनयसँगै निर्देशनमा समेत हात हालेकी युवा पुस्ताकी रंगकर्मी राईले आफूलाई अझै दरिलो रूपमा उभ्याएकी छन् । नाटकमा प्रयुक्त संगीत, ध्वनि र दृश्य परिवर्तनको अवधिमा प्रयुक्त प्रकाश व्यवस्थापनमा दर्शकले केही समय कुर्छन् तर पट्यारै मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनन् । तीन दशकअघिको समय र संस्कारलाई जीवन्त देखाउन सौजन लिम्बू, राजेन्द्र कट्टेल, सुमन कोइराला, प्रकाश थापा, चन्द्र नेपालीलगायतले सशक्त अभिनय गरेका छन् । आरोहण गुरुकुलद्वारा काठमाडौं थापागाउँमा सञ्चालित कुञ्ज थिएटरमा गत शनिबारदेखि सुरु भएको नाटक असार ११ सम्म चल्नेछ ।
प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०८:४८
भारतीय कलाकार सञ्जयकुमार र श्रीमती सञ्जिदाका कला प्रदर्शनमा
काठमाडौँ — कुनै पनि मुलुकलाई भौगोलिक रूपमा छुट्याउन सिमाना हुन्छन् । तर, कला सिर्जनाको पक्षमा भूगोल होइन, मानवता र एउटै प्रकृतिको कुरा आउँछ भन्ने मान्यता राख्छन्, भारतका चित्रकार सञ्जयकुमार सहानी । एक जना सर्जकका लागि प्रकृति र उसका भोगाइ मानवताका हिसाबले समान देख्ने चित्रकार सञ्जय बेलाबेला नेपाल आउँछन् र यहाँका कलाप्रेमीलाई आफ्ना सिर्जनाका स्वाद चखाउँछन् ।
झन्डै आधा दशकअघि नेपालमा एकल चित्रकला प्रदर्शनी गरेका उनी फेरि यस्तै कलाका साथ नेपाल यात्रामा छन् । यसपटक भने उनले श्रीमती सञ्जिदा खनामका कलाकृतिहरू पनि साथै लिएर आएका छन् ।
सञ्जिदा र सञ्जयका डेढ दर्जनभन्दा बढी चित्र ठमेलस्थित मिथिला येन आर्ट ग्यालरीमा प्रदर्शनीमा छन् । ‘इनोभेसन अफ युथ’ शीर्षक राखिएको प्रदर्शनीलाई बुधबार नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति केके कर्माचार्य, ग्यालरीका निर्देशक श्यामसुन्दर यादव, अग्रज चित्रकार गेहेन्द्रमान अमात्य, गौतमरत्न तुलाधर, लेखक एवं समीक्षक रामदयाल राकेशलगायतले अवलोकन गरे ।
प्रदर्शनीमा आजको समय, युवा र प्रकृतिलाई केन्द्रमा राखेर सिर्जना गरिएका कलाकृति छन् । प्रकृतिबोधक अमूर्त रूपमै मूर्त अर्थ दिने सञ्जयका कला सिर्जना निकै सुन्दर छन् । युवापुस्ताको मानसिकतालाई समेत उनले मिहिन ढंगले केलाएका छन् । अहिलेको पुस्ताले प्रकृति प्रविधि, शिक्षा, घर, परिवारको मानसिक दबाब बोकेर हिँड्नुपरेको यथार्थलाई उनले कलामार्फत अभिव्यक्त गरेका छन् । एउटा सर्जक जसरी जुन अवस्थामा बाँच्छ, त्यही नै उसको सिर्जनामा आउने सञ्जयले सुनाए । ‘मेरो लागि कला जीवनको पाटो हो,’ उनले भने, ‘मैले बाँचेको र महसुस गरेको कुरा नै मेरो कलामा आएका छन् ।’
आजको समयमा युवा मानसिकता र उनीहरूले बोकेको बोझ जुनसुकै भूगोलमा पनि एकै खालको रहेको उनको बुझाइ छ । आफ्ना कलाकृतिले सबै भूगोलका सम्पूर्ण युवा र उनीहरूको अवस्थालाई चित्रण गर्ने उनले सुनाए । प्रकृति प्रेम दर्शाउने चित्रबारे सुनाउँदै उनले आजका युवालाई यसको महत्त्व बुझाउन जरुरी रहेको ठहर गरे । उनले भने, ‘प्रकृति सबैको लागि चाहिन्छ । प्रत्येक घरका भित्तामा प्रकृति झल्काउने चित्र राखे ‘प्रकृतिलाई जोगाऔं’ भन्ने भाव आउँछ ।’ सञ्जिदाका चित्रमा भने अर्ध अमूर्त र कतै मूर्त रूप देखिने महिला फिगरसहितका मानसिक आवेग दर्शाउने कला छन् ।
चित्रहरू अवलोकन गर्दै लेखक एवं समीक्षक रामदयालले नेपाल र भारतबीच सदिऔंदेखि रहेको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन प्रदर्शनीले सघाउ पुराउने धारणा राखे । उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच कला, कलाकारको परिचय मिथिला कलाकालदेखि नै परिचित छ । प्रदर्शनीले हामीबीच रहेको सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार र यहाँका कलाकर्मीसँग पनि कलात्मक परिचय हुन्छ ।’ प्रदर्शनी युवा कलाप्रेमीलाई प्रेरित गर्न कोसेढुंगा बन्ने उनले आशा राखे ।
कोरोना महामारीको समयमा भएका कला सिर्जनाबारे स्मरण गर्दै प्रतिष्ठानका कुलपति कर्माचार्यले जुनसुकै भूगोल र अवस्थामा पनि सिर्जनाक्रम नरोकिने दाबी गरे । ‘कला सिर्जना कलाकारमा भर पर्ने कुरा हो । समय, प्रकृति, भूगोल र परिस्थितिअनुसार बिम्ब फरक होला तर कला सिर्जना रोकिँदैन,’ उनले भने ।